Nomu S20, famakafakana video an'ity telefaona goavambe ity izay mitentina € 135 | Androidsis
Nomu S20, famerenana amin'ny teny Espaniôla
Nomu dia mpamokatra iray izay manampahaizana manokana amin'ny famoronana fitaovana manasongadina ny fanoherana mafy ny hatairana sy ny rano mitete, ary koa ny fananana mari-pankasitrahana IP68 mamela ny finday Nomu hilentika tsy misy olana lehibe. Ary ohatra iray mazava ny Nomu S20.
Telefaona miavaka amin'ny vidiny mirary, tsy mihoatra ny 140 euro, ary manana fanamarinana IP68, ankoatry ny fanoherana ny hatairana na fianjerana. Tsy misy intsony Mamela anao amin'ny famakafakana feno aho aorian'ny fanandramana ity Nomu S20 iray volana ity.
1 Volavola tsotra nefa mahomby
2 Nomu S20 toetra ara-teknika
3 Ny efijery 720 indraindray mihoatra ny ampy
4 Nomu S20 dia sarotra esorina
5 GPS mandeha tsara
6 Batterie izay manao ny asany tsy misy fandokafana be
8 Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Nomu S20
9 Fehiny farany
Volavola tsotra nefa mahomby
Fantatro fa io no terminal goavambe, dia nanantena ny hahita ilay telefaona biriky mahazatra aho, matevina kokoa sy mavesatra noho ny fitaovana mahazatra, fa ny Nomu S20 dia manana famolavolana tena voafehy, bebe kokoa raha raisintsika ny toetrany teknika.
Ary izany no an'ny sasany mirefy 145.4 x 75 x 10.30 mm, Miaraka amin'ny lanjan'ny 169 grama, ny Nomu S20 dia terminal iray izay mahatsapa tsara ao an-tanana ary tsy manome lanja be loatra. Ho fanampin'izany, ny lamosiny, miaraka amin'izany fiarovana arofanina vita amin'ny kofehy vita amin'ny sisiny izany, dia manampy amin'ny fitazomana ny telefaona, ankoatry ny famoahana ireo marika amin'ny rantsan-tànana tsy ilaina.
Ny vatam-pilalaovana iray manontolo dia voasaron'io fingotra io, na dia eo amin'ny sisiny aza dia mahita vy izahay ankoatry ny rivets sasany izay manome ny Nomu S20 fanoherana bebe kokoa amin'ny fiantraikany sy ny fahalavoana. Ary, araka ny hitanao tamin'ny famerenantsika ny horonantsary, ny telefaona mahatanty fiatraikany tsara, raha toa ka tsy avy amin'ny avo izy ireo. Ho an'ny fampiasana isan'andro dia manome toky anao aho fa tsy mila miahiahy mihitsy ianao fa mijaly ny telefaona finday, raha tsy hoe latsaka amin'ny haavo avo mihoatra ny 1.5 metatra izy.
Eo amin'ny farany ambany dia hitantsika ny port USB micro. Ity seranan-tsambo ity, mitovy amin'ny fivoahan'ny feo sy ny slot amin'ny karatra SIM, manana takona vita amin'ny fingotra izy izay hisorohana ny fidiran'ny rano. Efa hitantsika io vahaolana io tao amin'ny terminal Sony fa tsy zavatra mahasosotra loatra izany.
Araka ny efa nolazaiko, ao amin'ny tapany ambony dia misy ny output audio 3.5 mm misy kapila miaro antsika, raha eo amin'ny ilany havia kosa no nametahan'ny ekipa mpamorona ny asiianina mpamorona ilay slot nano SIM + micro SD.
Ary farany, eo amin'ny ilany ankavanana dia misy ny fanalahidy fanaraha-maso ny boky, ankoatry ny bokotra on sy ny faran'ny terminal. Ny lalana dia mihoatra ny marina avokoa ny fanamafisana bokotra dia manome fanoherana tsara ny tsindry, tsy toy ny terminal hafa mikitoantoana izay matetika sarotra ny manindry ny bokotra.
Manohina ny miresaka ny frontal. Eto isika mihaona amin'ny sasany mihoatra noho ny frame mahatalanjona, zavatra azo takarina amin'ny telefaona vonona hiaritra ny fikorontanana sy ny fiantraikany, ho fanampin'ny fakantsary anoloana sy ny zavatra hafa kely. Any aoriana, izay misy fonosana fingotra, no ahitantsika ny fakantsary fampiasa amin'ilay fitaovana, ary koa ny sary famantarana ny marika sy ny mpandahateny azy.
Raha fintinina, fitaovana iray izay tsy miavaka amin'ny famolavolana fa manana refy sy lanjany tena mahomby, indrindra raha raisintsika fa terminal tsy voamarina izany. Satria efa nolazaiko anao fa toa tsy izany. Te hanana bokotra SOS aho, tena ilaina amin'ity karazana fitaovana ity izay mikendry ireo izay mampihatra fanatanjahan-tena mampidi-doza, ary koa ho an'ireo mpiasa mila telefaona mahazaka ny zava-drehetra, fa amin'ny ankapobeny dia eken'ny loko miaraka amin'ny loko manidina.
Nomu S20 toetra ara-teknika
efijery IPS 5 "miaraka amin'ny teknolojia 2.5D sy ny vahaolana HD 1280 x 720 mahatratra 294 dpi
processeur Mediatek MTK6737T miaraka amina core 53 GHz Cortex A1.5 ary maritrano 64-bit.
Tahiry anatiny 32 GB azo ovaina amin'ny alàlan'ny MicroSD hatramin'ny 128 GB
Fakan-tsary aoriana Sensor 219 MPX Sony IMX8 (mifangaro amin'ny 13 MPX) / autofocus / detection face / panorama / HDR / LED flash / Geolocation / 1080p fandraisam-peo video
Fakan-tsary mialoha Horonan-tsary 2 MPX (mifangaro hatramin'ny 5 MPX) / 1080p
Fitaovana hafa Fanamafisana ny radio FM / IP678 / Fantsona mihetsiketsika mahatohitra ny fiatraikany sy ny fianjerany
bateria 3000 mAh tsy azo esorina
lafiny X X 146.8 72.6 7.5 MG
lanja Gramin'ny 147
vidiny 134 euro ao amin'ny IGOGO
Ny telefaona dia manana fiasa izay hihoatra ny fahafaham-po amin'ny filan'ny mpampiasa rehetra. Amin'ity fomba ity ny processeur-nao MediaTek MTK6737T, SoC valo fototra misy maritrano 64-bit, manome fahombiazana mihoatra ny ampy izay nanampy azy Fahatsiarovana RAM 3 GB avelany handeha tsara ny zava-drehetra. Ary io lafiny io no tena marina fa ny Nomu S20 dia nahagaga ahy ahy ampy noho ny famindrana ny rafitra fandidiana, namakivaky ireo varavarankely samihafa haingana sy tamim-pitoniana.
Na dia marina aza fa ny telefaona avo lenta dia miasa haingana kokoa, manokatra fampiharana haingana kokoa noho ny terminal Nomu, zavatra antenaina izany raha toa ka manisy fiheverana ny fahasamihafana eo amin'ny vidiny lalina aho ary manome toky aho fa ny Nomu S20 mitondra tena amin'ny fomba mihaja kokoa. Nandritra ny iray volana no nampiasako an'ity telefaona ity ary toa tsy terminal fidirana - medium, tadidio fa 134 euro ny vidiny, manome fampisehoana tena tsara ary mamela ahy hampiasa azy io nefa tsy mijaly na mahavoky. Mazava ho azy, isaky ny alina dia novonoiko ilay izy mba hanombohana indray ilay terminal.
Ny ankamaroan'ny trosa dia mandeha amin'ny interface ampiasain'ny Nomu S20. Fa inona ny interface, raha tena mitempo ny telefaona Android madio? Marina indrindra. Novakianao tsara izany, nisafidy ny tsy hampiasa sosona mahazatra mahasosotra sy mavesatra ny mpanamboatra amin'ny alàlan'ny fametrahana Android 6.0 M nefa tsy misy rindran-damina ao amin'ny terminal, zavatra izay tiako indrindra.
Ary ahoana no fiasan'izy io amin'ny lalao? Rehefa dinihina ny GPU avoakany, a pMali T-720 MP2 600 MHz mpaka sary, Manantena aho fa ny Nomu S20 dia afaka mamindra izay lalao tsy misy olana loatra. Ary izany no izy. Izaho dia nilalao lalao izay mitaky loharanon-karena be dia be mba hiasa tsara, toy ny duel an'ny Knights, ary mila milaza aho fa tsara fitondran-tena ny terminal, mamindra ny lalao haingana ary tsy mijaly firy.
Izany dia tsy maintsy ampiana mpandahateny mahery vaika iray izay nanaitra ahy tamin'ny kalitaon'ny feo atolony, hahafahako mankafy lalao video sy atiny multimedia miaraka amina kalitao feo avo kokoa noho ny nandrasana tamina terminal misy ireo toetra ireo.
Ny efijery 720 indraindray mihoatra ny ampy
Ny efijery Nomu S20 dia misy a Tabilao IPS maranitra 5-inch IPS misy famahana HD, 1280 x 720 teboka, ary ny hakitroka 295 dpi, ho fanampin'ny fiarovana Corning Gorilla Glass 4 izay manome antoka ny fanoherana avo lenta ny fiantraikany sy ny fahalavoana. Ity ny fahagaga vaovao. Ary efa zatra nahita aho fa ny terminal tsy mikitoantoana dia misy efijery mahazatra, fa amin'ny tranga misy ny Nomu S20, ary araka ny hitanao amin'ny famakafakana video mitarika an'ity lahatsoratra ity dia tena tsara ny kalitaon'ny sary.
Ny tontonana IPS an'ny S20 dia manolotra loko mazava sy maranitra tokoas ankoatry ny fananana zoro fahitana tsara. Ny haavon'ny hazavana dia tsy tsara ary amin'ny andro main'ny masoandro dia afaka mahita ny efijery ianao, fa tsy amin'ny maranitra mitovy amin'ny terminal hafa. Saingy amin'ny ankapobeny, raha raisina ny laharana tadiaviny sy ny vidiny, dia toa iray amin'ireo efijery tsara indrindra hitanao aho.
Ratsy loatra amin'ireo sary goavambe ireo izay mahatonga ny traikefa ho lafo kokoa rehefa mijery atiny multimedia na milalao lalao video. Ny efijery dia mitana ny 64% amin'ny ampahany anoloana, zavatra lôjika ao anaty faran'ny toetran'ireto toetra ireto nefa mandanjalanja kely ny fampiasana azy mafy. Faharatsiana ambany kokoa ho takalon'ny fanoherana lehibe ny Nomu S20.
Nomu S20 dia sarotra esorina
Efa nilaza taminay izahay fa voamarina ny Nomu S20 IP68 ka mahatohitra vovoka sy rano ny telefaona, afaka milentika hatrany amin'ny 1.5 metatra mandritra ny 30 minitras. Tsy dia natoky be loatra an'ity endri-javatra ity aho, bebe kokoa tamin'ny telefaona nisy vidiny mirary toy izany koa nanapa-kevitra ny hametraka ilay terminal aho. Ary nandalo tamin'ny loko manidina izy io.
Ny fitsapana ny Nomoboka nandritra ny 20 minitra i Nomu S30 ary nandalo ny fitsapana tsy nisy sakantsakana. Afaka nahazo antso sy hafatra aza aho. Mazava ho azy fa fampijaliana ny fakana sary miaraka amin'ilay terminal nalentika, tsy nisy zavatra tsy voavaha tamin'ny alàlan'ny fanamafisana ny iray amin'ireo bokotra ara-batana hampavitrika ny fakantsary finday miaraka amina fampiharana.
Amin'ny ankapobeny ny Nomu S20 dia tsy manana fanamarinana ara-tafika fa terminal goavambe. Inona no dikan'ny hoe rough? tsara, milaza fa adjectif Castilianized izay avy amin'ny teny anglisy «ruggedize» Ary midika izany fa vonona ny hanome fanoherana tsara kokoa ny hatairana, ny fianjerana ary ny hafanana tafahoatra.
Amin'izany fomba izany, ary toy ny Mety nankasitrahanao ny famolavolana, ny Nomu S20 dia manana fanoherana lehibe kokoa amin'ny fikoropahana ary milatsaka noho ny telefaona mahazatra. Nanao fanandramana maromaro izahay mihoatra ny tolo-kevitr'ilay mpanamboatra mba hahatanty ny kapoka hatramin'ny 1.5 metatra ny haavony ary nahatanty lavo maromaro ny telefaona, na dia resy aza izany taorian'ny fiantraikany fahefatra. Na izany na tsy izany, ary araka ny hitanao tamin'ny horonan-tsary, natsipy lavitra mihoatra ny roa metatra ny telefaona, noho izany dia afaka milaza aho fa ny Nomu S20 dia hahatanty ny fianjerana mahazatra, avy amin'ny iray metatra na iray metatra sy sasany, tsy misy fahasimbana. ...
GPS mandeha tsara
Rehefa manandrana telefaona sinoa iray aho dia miahiahy momba ny GPS. Ireo terminal ireo dia matetika manome olana amin'ity lafiny ity ary telefaona misy ireo toetra ireo, izay tsy maintsy mahatohitra kokoa noho ny mahazatra ary izay kendrena mazava ho mombamomba ny mpitsangatsangana dia tsy maintsy manana GPS tena marina.
Soa ihany fa ny Nomu S20 dia tonga miaraka aminy GPS, AGPS ary GLONASS ka ho an'ny mpampiasa mahazatra rehetra dia ho ampy mihoatra ny ampy izany. Efa nanao fitsapana tany Barcelona aho ary nahita fiantohana vitsivitsy io fitaovana io. Nampiasaiko ihany koa izy io mba handehanana mihazakazaka ary ny fametrahana ny geo dia mihoatra ny ampy.
Batterie izay manao ny asany tsy misy fandokafana be
Ny bateria Nomu S20 dia misy 3.000 mAh ary mazava ho azy fa tsy azo esorina. Heveriko fa fahadisoana ny fampidirana bateria voafetra toy izany satria ny S30 sy S10 dia manana bateria lehibe kokoa, izay mahatratra 5.000 mAh. Fantatro fa tamin'ny tranga S20 dia nataon'izy ireo izany ka ny lanjan'ny terminal dia kely kokoa, fa ny fitaovana misy ireo toetra ireo dia tsy maintsy manana fahaleovan-tena ambonimbony kokoa noho ny mahazatra mba tsy hamela anao handainga amin'ny fotoana ratsy indrindra.
Efa nanao fitsapana maromaro aho ary tokony hiteny aho fa tsy nandiso fanantenana ahy ny fizakantena, saingy tsy nahagaga ahy ihany koa izany. Andro iray ampiasana mafy, miaraka amin'ny milalao 1 ora, Spotify 2 ora, mamaly ny mailaka ary mampiasa tambajotra sosialy hafa ankoatry ny fizahana amin'ny Internet, dia tonga alina ny terminal miaraka amin'ny bateria 30% - 35%.
Izany dia miteraka afizakantena izay manodidina ny iray andro sy sasany ny halavany. Olona tena tsara nefa raha jerena ny efijery HD misy amin'ny haitao IGZO dia antenaiko hahatratra roa andro ny fizakantena.
Farany hiresaka aminao aho lavitra ny fakantsary. Amin'ity tranga ity dia mahita fakan-tsary an-tsary 2 megapixel isika, azo adika hatramin'ny 5 mpx. Ny marina dia somary normal ny kalitaon'ny fakana an-tsary, noho izany dia hifantoka amin'ny fakantsary anoloana izy ireo, noforonin'ny solomaso Sony IMX12PQ Exmor, miaraka amina megapixel 8 tena izy ary iray vavahady f / 2.0.
Nilaza taminay ny mpanamboatra fa ny telefaona tHo avy tsy ho ela ny fanavaozana ny lozisialy izay hanatsara ny kalitaon'ireo sary saingy tsy maintsy milaza aho fa, raha tsy mandeha lavitra, ny fisamborana azo tamin'ny Nomu S20 dia ampy kokoa hanavotana anao amin'ny maimaika. Ao amin'ny tontolo mirehitra mazava dia maka sary mihaja be izy, miaraka amin'ny loko mazava sy tena izy. Mazava ho azy, raha te haka sary amin'ny toerana tsy dia mazava ianao na amin'ny alina dia hiseho manerana ny sary ny voa. Na firy na firy flash ampiasainao.
Hoy aho, fakan-tsary tsy misy fety be nefa mihoatra ny fanatanterahana ny iraka ampanaovina azy amin'ny alàlan'ny fanolorana kalitao mihoatra ny ampy hialana anao amin'ny maika ary avelao haka an'io sary tsy mampino io eo afovoan'ny tendrombohitra
Sarin'ny sary nalaina niaraka tamin'ny Nomu S20
Nomu nanaitra ahy izany Nomu S20. Raha raisina ny toetra mampiavaka azy ara-teknika, ny fanoherana ny vovoka sy ny rano, finday goavambe mba hizakana ny fiantraikany sy ny latsaka tsy nahy, ataovy ity safidy ity ho safidy tena tsara raha mitady telefaona mora vidy eran'ny tany rehetra ianao.
Famolavolana voafetra ho terminal matevina
Tsy ampoizina ny kalitaon'ny efijery
Vidiny tena mahaliana
Manana Radio FM
Tena tsara ny feon'ny mpandahateny anao
Tsy misy fampandrenesana LED
Vola anoloana lehibe dia lehibe
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Nomu S20, famerenana amin'ny teny Espaniôla
Ankavanana vidiny elektronika dia hoy izy:
Iza koa no mieritreritra an'izany?
Valiny amin'ny zon'ny vidin'ny elektronika
Carolina dia hoy izy:
Ankafiziko ny famolavolana sy ny fanoherana an'ity telefaona ity, tiako ny handresy azy amin'ny hetsika #BlackFriday izay hatao amin'ny tranokala Nomu ofisialy.
Ity ny rohy fampahalalana: https://www.facebook.com/nomues/posts/1571994802826016
Raha miasa tsara ianao dia mahomby, antenaiko fa handresy. Hahaha
Valiny tamin'i Carolina
Antonio GIR dia hoy izy:
Alfonso, tiako ny fandinihanao an'ity telefaona ity saingy mieritreritra aho fa tsy ilaina intsony ny mamorona monstrosity toy ny "rugerizar". Misy ny solony tsy mila mandaka ny fiteninay.
Valiny tamin'i Antonio GIR
Sarah Puma H. dia hoy izy:
Raha mbola tsy mirakitra horonantsary manao izany aminao izy ireo: http://www.youtube.com/watch?v=paNoi16Ly2k … Hahaha
Misaotra amin'ny fanamarihana! Tiako ny tsy hidirany amin'ny sakana henjana: tongasoa foana ny tolotra: 3 na dia heveriko manokana fa ny x1 misy 8 cores 1.5 GHz, ram 4GB, memoara 64GB, ary fakantsary miisa 13 Megapixel roa dia tsara kokoa; misy vidéo any izay mampitaha azy ireo koa ... (antenaiko fa tsy misy marotoa tafiditra ao xD)
Valiny tamin'i Sarah Puma H.
Mpivarotra Pixel maro no mampiato ny kaonty Google azy ireo